HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News 3.11.0-b922 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.11.0-b922 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဝယ်လိုအားအပေါ်ရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုး, တိုက်ရိုက်သတင်း & နောက်ဆုံးပေါ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ Entertainment ကစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါသလား? HOOQ ရယူပါ!
အကောင်းဆုံးကိုဟောလိဝုဒ်နှင့်အာရှဖျော်ဖြေရေးခံစားပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် HOOQ မူရင်းရှိုးပွဲများ, အကြီးမားဆုံး DC ကနှင့်အံ့ဩခြင်း Blockbuster နှင့်မူးရူး-ထိုက်တန်တီဗီရှိုး မှစ. - HOOQ သင်တို့အဘို့ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်။
မေတ္တာနည်းနည်းအဘို့သင့်ထိုင်ခုံရဲ့အစွန်းပေါ်တွင်သင်ထားကြောင်းအရေးယူရုပ်ရှင်များ, သင်ကြောက်စိတ်ပေးလိမ့်မယ်သည်ဟုအသံကျယ်, ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်တွေထုတ်ရယ်မောကြလိမ့်မည်ဟုဟာသရုပ်ရှင်များ, နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ကိုခံစား HOOQ လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်!
ကျနော်တို့အဆိုပါ Flash ကို, Supergirl, Arrow, မနက်ဖြန်၏, DC ရဲ့ Legends နဲ့အများကြီးပိုပြီးများကဲ့သို့အမေရိကန်ကဲ့သို့တူညီသောနေ့၌အသစ်သောဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဟောလိဝုဒ်ထံမှပြသထားတယ်ကြီးမြတ်တီဗီအများကြီးရရှိပါသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲအပြီးအပိုင်း, သင့်နှလုံးရဲ့ content တွေကိုမှီတိုင်အောင်စောင့်နေကြလော့။
ရုပ်ရှင်ရုံကနေလတ်ဆတ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ထက်လျော့နည်းဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသစ်ကိုရုပ်ရှင် stream ။ သငျသညျအော့ဖ်လိုင်းစောင့်ကြည့်ချင်လျှင်, ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်, အချိန်မရွေးမှာပျော်မွေ့ဖို့မဆိုရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီရှိုး download လုပ်ပါ။
သငျသညျ 24/7 က Non-Stop Entertainment ကများနှင့်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းရှာနေလြှငျ, HOOQ ရ! CNN က, TIME, Channel ကိုသတင်းအာရှ, PTV, DW, အယ်လ်ဂျာဇီယာ, ဘလွန်းဘာ့ဂ်နှင့် Fortune မဂ္ဂဇင်းတူသောသတင်းလိုင်းများနှင့်အတူသတင်းပေးပါ။ ငါတို့သည်လည်းဂီတ, အားကစားပုံနဲ့တူအားကစားလိုင်းများ, အစားအစာ, ကျန်းမာရေး, BuzzFeed, သင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိုက်ညီဖို့ပိုဆက်ကပ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင် & တီဗီစာကြည့်တိုက်ကိုဖြတ်ပြီးအများအပြားအမျိုးအစားရှိသည်:
- ကလေးများ & မိသားစု
- သိပ္ပံ Fi ကို & Fantasy
- Plus အားအများကြီးပို!
Plus အား, 24/7 က Non-Stop Entertainment ကလိုင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးရှာဖွေတွေ့ရှိ:
ငါတို့သည်သင်တို့အင်္ဂလိပ်, Bahasa အင်ဒိုနီးရှား, ထိုင်း, ဟိန်နှင့်ပိုပြီးအတွက်ဘာသာစကားများနှင့်စာတန်းထိုးနဲ့ဖုံးလွှမ်းတယ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ် Blockbuster, ဒီနေ့သတင်း, ပုံပြင်များ, အသစ်သောဂီတကိုသူတို့သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ပါပဲ။
- တစ်ဦးအနိမ့်စျေးနှုန်းအပေါင်းရက်ပေါင်း 90 လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးပေါ်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့တစ်လလျှင်ငှားဖို့တဦးတည်းရုပ်ရှင်မှာ (ငှားရမ်းမှုဖယ်ထုတ်ပြီး) န့်အသတ်တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုစီးဆင်းစေ။
- သင်ချင်သကဲ့သို့အများအပြားရုပ်ရှင်များ, ရှိုးများ, သတင်း, လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းအရာနှင့်တိုက်ရိုက်တီဗီလိုင်းများစီးဆင်းရန်အ HOOQ app ကို download လုပ်ပါ။
- သစ်ကိုခေါင်းစဉ်မှန်မှန်ထည့်သွင်းခံနှင့်အတူများစွာသောအမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းအရာထက် ပို. 10,000 နာရီရှာဖွေပါ။
- 24/7 က Non-Stop Entertainment က၏လိုင်းများ။ သတင်း မှစ. , အားကစား, ဂီတ, ကနျြးမာရေး, စားနပ်ရိက္ခာနှင့်လူနေမှုပုံစံ။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ streaming start သလဲ? HOOQ သင်တို့အဘို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော subscription ကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကအသက် 30 ရက်ကြာ HOOQ subscription ကိုမဆိုစက်ပေါ်ရှိဝယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုန့်အသတ်လက်လှမ်းနှင့်တကွကြွလာ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံကနေလတ်ဆတ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ကိုခံစားဖို့လစဉ်လတိုင်းအခမဲ့ငှားရမ်းလက်မှတ်ရယူမည်။ သင်တို့သည်လည်းခေါင်းစဉ်နှုန်းသေးငယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှာအဲဒီရုပ်ရှင်ကားငှားလို့ရပါတယ်။
စျေးနှုန်းများအဘို့, ဒီမှာတွေ့မြင်: https://www.hooq.tv
သင်ဟာ HOOQ'd get ကြပါစို့ ယခုရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုး, သတင်းနှင့် 24/7 က Non-Stop Entertainment က Watch! အဆိုပါ HOOQ app ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာဖျော်ဖြေရေး၏လောကဓာတ်ခံစားရသည်။
သငျသညျ, အပလီကေးရှင်းပေါ်တွင်သင်၏ HOOQ အကောင့်သို့ logging အားဖြင့်မည်သည့်အချိန်က cancel '' Subscription '' ကို click နှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း subscription ကိုကာလအဘို့အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းသို့မဟုတ်အကြွေးရှိပါတယ်။
app ကိုအပေါ်ချက်ချင်း HOOQ စောင့်ကြည့်ဖို့, သင်လိုအပ်သမျှအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 158.66k 64.93M
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.11.0-b922
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.hooq.tv/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: CB:D2:5C:AA:4A:18:1B:E5:57:E6:F3:42:D7:23:3F:93:02:D9:10:68
ထုတ်လုပ်သူ (CN): HOOQ
အဖွဲ့အစည်း (O): HOOQ
HOOQ - Watch Movies, TV Shows, Live Channels, News APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ